Umaki: ukwehlisela eminyakeni yobudala bedijithali | Martech Zone
Umaki: ukwehlisela eminyakeni yobudijithali
Izinzuzo Zokuhlolwa kwamakhuphoni nezaphulelo
NgeSonto, Novemba 29, 2015 NgoMsombuluko, Novemba 30, 2015 Douglas Karr
Ngabe ukhokha iphrimiyamu ukuthola imikhondo emisha, noma unikeza isephulelo ukuze uzihehe? Ezinye izinkampani ngeke zithinte amakhuphoni nezaphulelo ngoba zesaba ukwehlisa umkhiqizo wazo. Ezinye izinkampani sezincike kuzo, ngokunciphisa ingozi yenzuzo yazo. Akungabazeki ukuthi bayasebenza noma cha. Ama-59% wabakhangisi bedijithali bathe izaphulelo nezinqwaba ziyasebenza ekutholeni amakhasimende amasha. Ngenkathi izaphulelo zingavamile ekushayeleni izinzuzo zesikhashana, zingadala umonakalo